XIISE DIB LOO HELAY: Labadii kulan ee ay AC Milan San Siro ku ciyaartay waxaa daawaday in ka badan 100 kun oo taageere – Gool FM
XIISE DIB LOO HELAY: Labadii kulan ee ay AC Milan San Siro ku ciyaartay waxaa daawaday in ka badan 100 kun oo taageere
Raage September 19, 2017
(Milano) 19 Sebt 2017 – Kooxda AC Milan ayaa u muuqata mid dib u kasbanaysa taageerayaasheeda maxalliga ah ee loo yaqaanno Milanista, kuwaasoo aan sanadihii dambe ku qanacsanayn sida loo maareeyay kooxda Milan.
Yeelkeede, kaddib markii ay kooxda iibsadeen ganacsato Chinese ah oo si wayn u maalgeliyay xagaagii oo ay usoo iibiyeen laacibiin ku kacay lacag ku dhow 250 milyan oo euro waxaa soo noqonaya xiisihii taageerayaasha.
Sida maanta ku dhigan warsidaha Tuttosport, taageerayaasha ayaa kusoo xoomaya xitaa kulamada aan sidaa u adkeeyn, tusaale ahaan waxaa kulankii Udinese daawanayay in ka badan 50 kun oo taageere oo soo xaadiray garoonka San Siro, taasoo ka dhigan in labada kulan ee ay Milan gurigeeda kula ciyaartay Cagliari iyo Udinese ay daawadeen dad ka badan 100 kun oo taageere, taasoo ah koror dhan 45-40% marka loo eego sanadkii hore.
Sidoo kale kulamadii EL ee ay Milan San Siro ku ciyaartay ayaa soo jiitey ka qayb galayaal aad u fara badan, tusaale ahaan, waxaa lugtii 2-aad ee Craiova daawanayay in ka badan 70 kun oo taageere.
Juventus oo badalka Buffon ka raadinaysa horyaalka Spain